Swel Sone News – Page 109 – Everyday Useful News
သမီးလေး ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာယခုလက်ရှိအချိန်တွင် တရားခံအောင်ကြီးအား တရားခံအဖြစ်စွပ်စွဲကာတရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုသို့ တရားစွဲ ဆို ထားမှု အ ပေါ် နမ့်စန်မြို့ ကကိုယ်ပိုင်အထက်တန်း ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီး ဦး ကောင်းမြတ်သူက ယနေ့ မှာတော့ အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ ငွေမရှိတဲ့သူတွေကို ထောင်ထဲပို့တာလား။” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားတွေကတော့အမှုအခင်းဖြစ်ရင် ခင်ဗျားတို့ကို အကူအညီတောင်းဖို့နေနေသာသာ ခင်ဗျားတို့ သိမှာတောင် ကြောက်နေကြပြီ။ခင်ဗျားတို့က ငွေရှိ ဂုဏ်ရှိတဲ့သူတွေကို ချိုသာသလောက် ဆင်းရဲသား မျက်နှာမွဲတွေကိုတော့ ခြောက်စား မြောက်စား ငိုစား ရီစား ဟောက်စားတတ်တယ်။Victoria ကလေး အမှု ၊လနဲ့ချီကြာ ၊ အီးရောအီးရောနဲ့ အချိန်ဆွဲ ၊ ပြည်သူတွေကပေါက်ကွဲ၊ သမ္မတအထိရောက် ၊ တရာခံမိအောင်ဖမ်းဆိုတော့ ကားဆရာကို ချက်ချင်းဖမ်းပြလိုက်တယ်။သူက ကျောထောက်နောက်ခံမရှိတဲ့ ဆင်းရဲသားဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ ချက်ချင်း ဖမ်းနိုင်မှာပေါ့….. ခင်ဗျားတို့ပဲ ကားဆရာကို...
ယမန်နေ့ ညက ရဲဇာနည် Page ကနေ ဦးသက္ကမိုးညို နဲ့ မပိုးဖြူတို့ကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းဖုတ်ပြန်ခဲ့ ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်း ထုတ်ပြန် ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှု ကွန်ရက် အသုံးပြု သူတွေက ပြင်းပြင်း ထန်ထန် တုန့်ပြန် ခဲ့ကြ တာပါ။ ဒီလိုပြောဆို ဝေဖန်သူတွေ ထဲမှာ ပန်ကိတ်ဒါဒါ လည်း ပါဝင်လို့ လာခဲ့ ပါပြီ။ တော်ရုံ တန်ရုံ အေးအေး ဆေးဆေး နေတတ်တဲ့ ပန်ကိတ် တယောက် ရဲဇာနည် ရဲ့ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အောက်မှာ သတ္တိ ရှိရှိ သွားရောက် မှတ်ချက် ပေးခဲ့ တာပါ ။ ပန်ကိတ်က ‘ ဒီလို အရည်မရ အဖတ်မရတွေ လုပ်နေမယ့်...
11.7.2019တဦး​မေတ္တာနဲ့တဦး​စေတနာပါပဲသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်အဖွားဒေါ်ခင်တင့်မှရွှေထီးထီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်ဦးစောဝင်းအားကားတစီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်​။ Source:U Aye Minn
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ကိုသားကြီးလို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ အနုပညာလောကမှထိပ်တန်းကနေ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့အတူ ပရိသတ်တွေရဲ့ ရင်ထဲ အခိုင်အမာနေရာယူထားတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော အနုပညာရှင်ကတော့ ပြည်သူပရိသတ်တွေအားလုံး ယနေ့တိုင် မမေ့နိုင်သေးတဲ့ အကယ်ဒမီမင်းသာ ဒွေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ ဒီကနေ့လေးကတော့ ပြည်သူ့အချစ်တော် ကိုသားကြီး ကွယ်လွန်သွားတာ (၁၂)နှစ်ပြည့်တဲ့ နေ့ရက်လေးဖြစ်ပြီး ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ အနုပညာလောကနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ထာဝရခွဲခွာသွားခဲ့တာ (၁၂)နှစ်ပြည့် တိတိပြည့်သွားခဲ့ပါပြီနော်..။ ဒီကနေ့လေးမှာတော့ ကိုသားကြီးကိုလွမ်းဆွတ် သတိရစွာနဲ့ မမေ့နိုင်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကိုလည်း အနုပညာရှင်တော်တော်များများနဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သတိတရနဲ့ လွမ်းဆွတ်သတိရကြောင်းနဲ့ ဆုတောင်းမေတ္တာလေးတွေ ပို့သထားကြတာလည်း အများအပြားတွေ့မြင်ရပါတယ်နော်..။ ကိုသားကြီးကတော့ သဘာဝဇာတ်ရုပ်တွေနဲ့ ပကာသနမဖက်တဲ့ နေထိုင်မှုတွေနဲ့အတူ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်မှုတွေကလည်း ယနေ့အချိန်ထိ ပရိသတ်တွေရဲ့ မှတ်ဉာဏ်တွေထဲမှာ အထင်အရှားပေါ်လွင်နေတုန်းပါပဲနော်..။ အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုတွေများစွာ ရရှိထားတဲ့ ကိုသားကြီးလို့ အားလုံးက ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဒွေးကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့(၂၀၀၇)ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၁)ရက် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) ညနေ...
Messenger ကနေ ညစ်ညမ်းကား လာပို့တဲ့ မိန်းကလေးကို ထိထိရောက်ရောက် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ထူးအယ်​လင်း
အသံပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့ သီချင်းတွေကို ခံစားချက်အပြည့်နဲ့ သီဆိုလေ့ရှိတဲ့ အဆိုတော်ကြီး ထူးအယ်လင်းကတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်နဲ့ အလှူအတန်းဆိုလည်း လက်မနှေးတာကြောင့် အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေ အခိုင်အမာရရှိထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင် ချစ်ရတဲ့ ဇနီးချောလေးနဲ့ သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ထူးအယ်လင်းကတော့ လတ်တလောမှာလည်း မနက်စောစော Messenger ကနေ ညစ်ညမ်းကား လာပို့တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ တည်ငြိမ်လွန်းတဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းကတော့ အဆိုပါကောင်မလေးကို ပညာသားပါပါနဲ့ တုံ့ပြန်လိုက်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေကလည်း သဘောကျနေကြတာပါ။ ချစ်ပရိသတ်တွေအတွက် သူ့ကို Messenger ကနေ ညစ်ညမ်းကား လာပို့တဲ့ ကောင်မလေးအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ထူးအယ်လင်းရဲ့အကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းကတော့ “မနက်အိပ်ယာနိုးနိုးခြင်း ကာမဆက်ဆံတဲ့ အပြာကား Messenger ကနေ Fb friend တစ်ယောက်က ပို့လာတယ် …ပို့တဲ့သူရဲ့ဝေါထဲဝင်ကြည့်တယ်...
ပရိသတ်ကြီးရေ လွင်မိုးကတော့ ငယ်စဉ်အရွယ်တုန်းက ခန့်ညားချောမောပြီး တည်ကြည်လွန်းလို့ ပျိုတိုင်းကြိုက်တဲ့ နှင်းဆီခိုင်လေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်နော်။လွင်မိုးက ဇာတ်ကားတိုင်းကို ပီပြင်ပိုင်နိုင်တဲ့ အိုင်တင်တွေထုတ်ပြီး သရုပ်ဆောင်တာကြောင့် သူ့ရဲ့ ဇာတ်ကားများဟာ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်နော်။ လွင်မိုးက ချစ်ရတဲ့သူနဲ့အတူတူ နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးကို တည်ဆောက်လိုက်ပြီး ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်က နားလည်မှုတွေ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေနဲ့ ဘဝခရီးလမ်းကို လျှောက်လှမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဇနီးသည်မေသူကလည်း ခင်ပွန်းအပေါ် သေချာဂရုစိုက်တတ်တဲ့ ဇနီးကောင်းတစ်ယောက်ပါနော်။အခုဆိုရင်တော့ သမီးကြီးကမွေးတဲ့ မြေးလေးကိုလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်လို့ သာယာစိုပြေတဲ့ မိသားစုလေးဖြစ်ပါတယ်။ လွင်မိုးတို့ ဇနီးမောင်နှံဟာ မကြာသေးမှီအချိန်က မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကို သွားရောက်ဖူးမြှော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွင်မိုးရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မမေသူက ” ဆရာတော်ဘုရား ကြီး အပူဇော်ခံကြွတော်မူတဲ့၇ရက်မြောက်နေ့မှာ ဖူးမြှော်ပူဇော်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။ သာယာတဲ့ တောရိပ်တောင်ရိပ်မှာ ကျေးငှက်သံလေးတွေပဲရှိပြီး အားလုံးစည်းကမ်းသေဝပ်စွာနဲ့ဆရာတော်ကြီးကြွလာစဉ်, ဆွမ်းအလှူခံချိန်, ပြန်ကြွသွားတော်မူတဲ့အချိန် တစ်လျှောက်လုံး သံဃာ့ဂုဏ်ကိုအာရုံပြုပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ ဖူးမြှော်ခဲ့ရတာ ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်??? ” ဆိုပြီး တင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။...
လူတစ်ယောက် အထုတ်လေးတစ်ထုတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတာမြင်လို့ကားလေး ခဏရပ်ပြီး ဦးလေးဘယ်လဲလို့မေးလိုက်သောအခါ
ညနေ 4နာရီလောက်က လူတစ်ယောက် အထုတ်လေးတစ်ထုတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတာမြင်လို့ ကားပေါ်တင်ပြီး ဘယ်သွားမလဲမေးလိုက်သောအခါ …ဗျာ..ဆိုပြီး အံ့ဩ သွားရတဲ့ဖြစ်ရပ်… ဒီနေ့ ညနေ 4နာရီလောက်က ကသာအင်းတော် လမ်းပေါ် ကသာမြို့အထွက် သုံးခွရွာအနီး လူတစ်ယောက် အထုတ်လေးတစ်ထုတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတာမြင်လို့ ကားလေး ခဏရပ်ပြီး ဦးလေးဘယ်လဲလို့မေးလိုက်မိတယ်။ ဒီနားတင်တဲ့ ဒီနားက ဝေးလားလို့ ကျနော့်ကားပေါ် လိုက်ခဲ့လေ ကသာသွားမှာဆိုတော့ ကားပေါ်တက်လာပြီး နဲနဲဝေးတယ်တဲ့ မြစ်ကြီးနားသွားမှာ စရိတ်ပြတ်လို့ လမ်းလျှောက်နေတာ မနေ့ညထဲက ထီးချိုင့်က လျှောက်ခဲ့တာတဲ့. လူတစ်ယောက် အထုတ်လေးတစ်ထုတ်နဲ့ လမ်းလျှောက်လာတာမြင်လို့ ကားလေး ခဏရပ်ပြီး ဦးလေးဘယ်လဲလို့မေးလိုက်သောအခါ 1 ဗျာဆိုပြီး အံ့ဩ သွားတော့ ဆက်ပြောတယ်… မြစ်ကြီးနားမြို့ မြေမြင့်ရပ်ကွက်က သူ့သား အိမ်က ထွက်သွားတာ 8လရှိပြီမို့ စိတ်ပူပြီးလိုက်ရှာနေရင်း တစ်လကျော်ကြာသွားလို့ စရိတ်ပြတ်သွားတာဆိုဘဲ။ ဦးလေး ထမင်းစားပြီးပြီလားဆိုတော့လဲ သူများကြွေးလို့...
ခြူးလေး ကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲ မင်းသမီး တစ်ဦးအနေဖြင့် အနုပညာလောကထဲကို ၀င်ရောက်လာသူဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုအခိုင်အမာရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရရှိတဲ့မျက်နှာလေးနဲ့ ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားလေးကြောင့် ပုရိသတွေရဲ့ ၀န်ရံခြင်းခံနေရပြီး လက်တလောမှာတော့ ချစ်စရာဟန်ပန်လေးနဲ့ TikTok ဗီဒိယိုလေးကြောင့်လဲ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကို ထပ်မံသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ သူမကတော့ ” ထာဝရမန္တလေး ” ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးထဲမှာ ” ငွေရည်နှင်းစက် ” နေရာမှ ပီပီပြင်ပြင်သရုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုရရှိထားပြီး အမြဲလိုလို ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်သူဘဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူမ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ” ချစ်ရပါသောနွေ ” ဇာတ်ကြီးဟာဆိုရင်လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ ကြားမှာ ရေပန်းစားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ခြူလေးကတော့ သူရဲ့ လက်ရှိဇာတ်လမ်းတွဲလေးရဲ့ ဇာတ်သိမ်းပိုင်းကို ပရိသတ်တွေနဲ့ထပ်တူ ရန်ခုန်နေကြောင်းကို ” ဘယ်သူ ကြိုက်ကြိုက် မကြိုက်ကြိုက် ကိုယ် ကြိုက်တယ် ” ချစ်ရပါသော နွေ “ဘယ်သူ...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ နေထိုင်တဲ့ သဘင်အနုပညာရှင်များ နေစရာအတွက် အခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေနိုင်ဖို့အတွက် သဘင်အဖွဲ့ အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖိုးချစ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာ သဘင်အိမ်ရာ စီမံကိန်းကြီးကို အကောင်ထည်ဖော်နေပြီး မကြာခင်မှာ သဘင်လောကသားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ မိသားစု (၅၀၀)နဲ့ (၁၀၀၀) ကြားနေထိုင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး အခြားတိုင်းနှင့်ပြည်နယ်မှ သဘင်အနုပညာရှင်များ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနဲ့ ကိုက်ညီလျှင် ဝယ်ယူခွင့်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘင်အနုပညာရှင်များအပ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်း ခွင့်မပြုသလို့ ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းလည်း ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာဖြစ်ပြီး သိန်း (၁၁၀) ကနေ သိန်း (၂၀၀) ကျော်အထိ A ၊ B ၊ C သုံးမျိုးခွဲခြားထားမှာဖြစ်ပါတယ်။(၂၀) ရာခိုင်နှုန်း သာ သွင်းရမှာဖြစ်ပြီး ကျန်တာကို (၁၅ )နှစ်အရစ်ကျနဲ့ ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။...
ကျိုက်မရောမြို့နယ် လက်ပံကျေးရွာ ဦးဖလုံ လယ်တဲအတွင်းတွင် ပဲခူးတိုင်း​ဒေသကြီး ကဝမြို့နယ် သက္ကလကျေးရွာမှ ​ရွှေ့​ပြောင်းလုပ်​ကိုင်​ရန်​​ရောက်​ရှိလာ​သော ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးစိန်သောင်း အသက် (၅၃)နှစ် သည် သမီးအရင်းဖြစ်သူ မတင် . . (ခ)မအိ . ၊ အသက် (၁၄) နှစ်(၄)လ အား ယမန်​​နေ့ည ဇူလိုင်​လ ၉ရက်​အထိ (၅)ကြိမ်​တိုင်​တိုင်​ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်ခဲ့​ကြောင်း သမီးအကြီးဖြစ်​သူမှ တိုင်​တန်းသဖြင့်​ လက်နက်နှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး လဲလှယ်ထား​သောအဖွဲ့မှ ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ပိုင် (ခ) နိုင်ဗျင်း အဖွဲ့နှင့် နယ်မြေခံရဲတပ်ဖွဲ့တို့သည် ၁၀ ရက် ၇လ ၂၀၁၉ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပူပေါင်းဖမ်းဆီးခဲ့​ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်​။ ML(​ပေးပို့သည်​) ကျိုက်​မ​ရော/မုဒုံ သတင်းစုံ